नेटवर्क २०२५ ले APAC व्यापार सफलता सक्षम पार्दै - प्रबिधी खबर
“कन्सोलिडेट इलास्टिक टार्गेट नेटवर्क, अनलकिंग न्यू डिजिटल भ्यालु” थिम रहेको एशिया प्रशान्त टार्गेट नेटवर्क सम्मेलन शुक्रबार अनलाइन सम्पन्न भएको थियो । सरकारी एजेन्सी, स्टान्डर्ड संगठन, उद्यम, क्यारियर र उद्योगको मेनस्ट्रीम विक्रेताहरु बाट लगभग ५०० प्रोफेसनलहरु यस सम्मेलनमा सहभागी थिए । यस सम्मेलनमा ह्वावेले PLDT, Telkom इन्डोनेसिया, ग्लोब र CMI आदिको रूपमा अग्रणी क्षेत्रीय अपरेटरहरुसंग इन्टेलिजेन्ट टार्गेट नेटवर्क आर्किटेक्चरमा छलफल गर्न र यातायात नेटवर्कको भ्यालु हाइलाइट गर्ने काम गर्यो ।
सम्मेलनको पहिलो दिन, ह्वावेका नेटवर्क मार्केटिंग र सोलुसन बिक्री विभागका अध्यक्ष गेरी लूले “नेटवर्क २०२५ ले व्यापार सफलता सक्षम पार्दै” मा आफ्ना दुई शब्द राख्नुभयो । आफ्नो मन्तब्यमा लुले भविष्यलाई “अनिश्चित” भन्दै सम्बोधन गर्नुभयो । ती अनिश्चितताहरुको सामना गर्दै उहाँले नेटर्वक २०२५ को माध्यमबाट भविष्यको निर्धारात्मक व्यापार सफलतालाई सक्षम पार्न ICT उद्योग नजिकबाट काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
डेल्टा भेरियन्टले एक पटक फेरी विश्वमा अनिश्चितताको छायाँ ल्याएको छ । तेस्रो पक्षको सर्वेक्षण अनुसार ६८५ व्यवसायी लिडरहरु “आर्थिक अनिश्चितता” लाई सबैभन्दा ठूलो जोखिमको रुपमा लिन्छन् । ICT उद्योग पनि अनिश्चितताको चुनौतिहरुको सामना गर्दैछ । नेटवर्कहरु महामारीबाट प्रभावित छन् । नेटवर्क ट्राफिक, ट्राफिक दिशा र सेवा आवश्यकताहरु अनुमान गर्न गाह्रो छ । व्यापार र नेटवर्कको अनिश्चितताले सीधा दुई प्रश्नहरु उठाउँछः “म कुन व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्छ?” र “मैले लगानी गर्न सबैभन्दा भ्यालुएबल ठाउँ कहाँ छ ? “
“सौभाग्यले हामीले ICT विकासको निश्चितताको लाभ उठाएर भविष्यको अनिश्चिततासंग सामना गर्न दुनिया भरमा सरकार, उद्योग संगठन र वाहकहरुद्वारा संयुक्त प्रयास देखेका छौं,” लुले भन्नुभयो । फाइबराइजेसन, इन्टरप्राइज क्लाउडिफिकेशन र उद्योग डिजिटलाइजेसन १ देखि ३ बर्ष पहिले भन्दा छिटो हुनेछ । अधिक देश, संगठन र कारियरहरुले ग्रीन ICT ऊर्जा संरक्षण र उत्सर्जनमा कमी ल्याउनको लागी मध्य देखि दीर्घकालीन रणनीतिक उद्देश्यको प्रस्ताव राखेको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा, ह्वावेले “NetX2025, गाइड टु द फ्युचर” प्रस्ताव गर्यो । NetX2025 गाइड मोडेलको उपयोग गर्दछः गीगाबिट एनिह्वेर, अल्ट्रा–अटोमेशन, इन्टेलिजेन्ट मल्टि–क्लाउड कनेक्शन, विभेदित अनुभव र पर्यावरण सद्भाव नेटवर्क निर्माणको मार्गदर्शन गर्न, लक्षित नेटवर्क योजना कारियरसंग र आईसीटी पूर्वाधारको निश्चितताको उपयोग गरी भविष्यका अनिश्चितताहरु सामना गर्ने, कारियरहरुलाई व्यापार सफलता र हरियो दिगो विकास प्राप्त गर्न मा मद्दत गर्दछ।
नेटवर्क NetX2025 को आधारशिला हो, नेटवर्क आर्किटेक्चर समर्थन सेवाहरुको लागि आधार हो । एक राम्रो आर्किटेक्चर डिजाइन पैसा बचाउन सक्छ । भविष्यको व्यापारलाई अंगाल्न कसरी नेटवर्क विकास हुनु पर्छ? त्यहाँ चार सिद्धान्तहरु क्यारियरको लक्ष्य नेटवर्क विकासको लागि दिशानिर्देशको रूपमा मान्न सकिन्छः
फाइबर पूर्वाधारः अप्टिकल फाइबर सम्पूर्ण नेटवर्कको आधार हो । फाइबर ग्रिड योजना टूलकिटको आधारमा यो अप्टिमल लागतमा आउदो २० बर्षमा पूर्ण सेवाको विकास हासिल गर्ने छ, कम से कम फाइबर दूरी सकेसम्म धेरै लक्षित प्रयोगकर्ताहरुलाई कभर गर्ने र घर ब्रोडब्यान्ड, उद्यम र मोबाइल सेवाहरुको लागि सेवा पहुँच आवश्यकता पूरा गर्ने छ । प्यासिब नेटवर्कको प्रबंधन सधैंझैं, FBB नेटवर्कको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आवश्यकताहरुमध्ये एक हो । लिगसी नेटवर्कमा फाइबर संसाधनहरु अदृश्य र अप्रबंधित छन् । ह्वावेको छिटो डिजिटल ODN सोलुसनसंग, यी समस्याहरुलाई हल गर्न सकिन्छ । धेरै सटीक र फाइबर संसाधन O&M को दक्षता सुधार गर्दै निष्क्रिय सञ्जाल देखिन्छ ।
सबै अप्टिकल आधारः अप्टिकल नेटवर्क सम्पूर्ण नेटवर्कको मुख्य अंग हो । नेटवर्कको स्वस्थ विकास सुनिश्चित गर्नको लागि मुख्य अंग यी हुनु पर्छः कन्जेसन मुक्त, कम विलम्बता, र उच्च विश्वसनीयता । 3D- मेश ब्याकबोनको विकास, OTN देखि हाई भ्यालु मेट्रो साइटहरुको र इनाबल ASON: अप्टिकल नेटवर्कको विकास दिशाहरु निर्धारित गर्न र क्यारियर SLAs फरक किसिमले मनिटाइज गर्न अनुमति दिन तीन आवश्यकताहरु हुन् ।
कन्भर्ज्ड आईपी बियररः भविष्यको IP आर्किटेक्चर सरल, फराकिलो र इन्टेलिजेन्ट हुनु पर्छ । IP ​​नेटवर्क विकास निम्न पक्षहरुमा गर्न आवश्यक छः (i) एक सरल फ्याबरीक आर्किटेक्चर, (ii) एक पूर्ण सेवा, 100GE अक्सेस तहमा र 400GE अग्रीगेसन–कोर तहमा तयार कन्जेसन मुक्त प्लेटफर्मको निर्माण, र (iii) SRv6 A र Z नोड्समा सक्षम गर्ने, सहज MPLS नेटवर्कसंग कनेक्ट गरेर सुक्ष्म–स्तर TTM प्राप्त गर्ने । लिंक भ्यालुमा आधारित, SRv6 हप–बाई–हप सक्षम गर्ने, बिस्तारै सम्पूर्ण नेटवर्क अटोमेसन अनुकूलन र एण्ड टु एण्ड डिटरमिनिस्टिक अनुभव आश्वस्त पार्ने ।
इन्टेलिजेन्ट व्यवस्थापन, नियन्त्रण र विश्लेषण प्लेटफर्मः एक “स्मार्ट ब्रेन” पनि हामीलाई अटोनोमस ड्राइभिङ नेटवर्कको हाम्रो भिजन प्राप्त गर्न मद्दत गर्ने शीर्ष नेटवर्क उपकरणहरुको आवश्यक छ । यो “स्मार्ट ब्रेन” एक नेटवर्क व्यवस्थापन, नियन्त्रण, र विश्लेषण एकीकृत गर्ने प्याटर्फम हुनेछ । विकासका ३ चरणहरुः खुलापन र सजिलो एकीकरण, नेटवर्क अटोमेशन र इन्टेलिजेन्ट O&M ।
विगत एक बर्षमा लगातार हातमा ग्लोबल साझेदारहरुसंग टार्गेट नेटवर्कको विकासको अन्वेषण संगै ह्वावेले FBB नेटवर्कको योजनादेखि निर्माण कति जटिल छ भनेर गहिराइबाट बुझ्दछ, डिजिटल प्लेटफर्मले व्यापार र नेटर्वक निर्माणका लागि पुल बनाउन टार्गेट नेटवर्कको विकासमा धेरै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।
ह्वावेको डिजिटल प्लेटफर्म उद्योगमा रहेको हाम्रो दीर्घकालीन संचित अनुभवमा आधारित छ र यसको क्षमता विगतका बर्षहरुमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । यसमा अधिक परिदृश्यहरु समर्थित छन्, जस्तै AirPON Faster ROI, नेटवर्क ऊर्जा दक्षता आकलन ।
“नेटर्वक २०२५ ले नेटवर्क योजना, नेटवर्क लगानी, सेवा विकास र व्यापार सफलता लाई राम्ररी जोड्दछ । अनिश्चितताको सामना गर्दै, नेटवर्क २०२५ को माध्यमबाट भविष्यको डिटरमिनिस्टिक व्यापार सफलता हासिल गर्न नजिकबाट काम गरौं,” गेरी लूले भन्नुभयो ।